Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Fametahana fatratra amin'ny ady amin'ny sakafo fisakafoanana mampidi-doza
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Misy fomba fihinanana mihoatra noho ny iray amin'ny maska.
Tao amin'ny sekoly fanabeazana fototra iray any amin'ny fanjakan'ny Washington, Etazonia, ny talen-tsekoly iray dia nilaza tamin'ny ray aman-dreny mba hilaza amin'ny zanany fa tsy maintsy manao saron-tava izy ireo rehefa misakafo atoandro ao amin'ny cafeteria - mandritra ny fotoana fisakafoanan'izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, makà forkful, ampidineno ny sarontava, alao ny manaikitra, atsangano ny sarontava anao, mitsako, mitelina, avereno.
Ny politikan'ny distrika momba ny fanaovana sarontava COVID-19 dia nilaza fa ny sarontava dia tsy tokony hatao rehefa misakafo.
I Jason Rantz, mpampiantrano amin'ny onjam-peo, dia nitondra ny sain'ny besinimaro tamin'ny alàlan'ny seho radio AM tao amin'ny KTTH any Seattle.
Nahazo kopian'ny mailaka nalefa tany amin'ny ray aman-dreny avy tamin'ny raim-pianakaviana iray izy izay nilaza fa fotoana mampidi-doza ny ora fisakafoanana atoandro.
Ny mailaka avy amin'ny talen'ny Geiger Montessori Elementary School any Tacoma, Washington, Andriamatoa Neil O'Brien dia nalefa tany amin'ny ray aman-dreny mba hanavaozana azy ireo momba ny politika COVID-19 an'ny sekoly. Hoy ny ampahany tamin'ny mailaka: “Tokony hisaron-tava ny ankizy mandritra ny sakafo atoandro. Azon'izy ireo atao ny mampidina azy io mba hihinana kely na hosotroina ary hampiakarina mba hitsakoana, hitelina, na hiresaka. ”
Nanohy ny fanazavan'ilay talen-tsekoly tamin'ny mailaka fa na eo aza ny fisian'ilay trano fisakafoanana manana «rafi-pitaterana an'habakabaka mahafinaritra» ary ny mpianatra dia lavitra ny fiaraha-monina, "mila itondrantsika ny ora fisakafoanana ho fotoana mampidi-doza ho an'ny rehetra."
Araka ny tranokalan'ny Sekolim-panjakana Tacoma, ny Covid-19 Ny politika dia milaza fa ny mpianatra, ny mpiasa ary ny mpitsidika dia “tsy maintsy manao saron-tava ao an-trano, raha tsy rehefa misakafo.”
Ny sekolim-panjakana Tacoma dia namoaka fanambarana manazava fa ny fandikan'ny Principal O'Brien ny torolalany dia nihoatra ny tanjona. Izao no voalaza ao amin'ny fanambarana:
"Ny fenitra napetraka tany Geiger tany am-boalohany dia napetraka tamim-pinoana tsara ho fandikana ny tari-dalan'ny departemanta fahasalamana amin'ny fanaovana sarontava rehefa 'misakafo mavitrika.' Amin'ny fizahana amin'ny departemantan'ny fahasalamana, io fenitra io dia mihoatra ny tanjon'izy ireo. Tsy hofehezinay ny mpianatra tsy hanao ny saron-tava anelanelany manaikitra. ”
Tsy voalohany amin'ny fanaovana masking mahery
Tamin'ny volana oktobra 2020, Gavin Newsom, Governoran'i California, dia nandefa bitsika iray momba ny fisakafoanana any amin'ny trano fisakafoanana. Hoy izy: “Miara-misakafo amin'ny mpianakavinao amin'ny faran'ny herinandro? Aza adino ny mitazona ny masonao eo anelanelan'ny manaikitra. ”
Nanampy sarimiaina misy tovovavy mitafy saron-tava mihitsy aza izy, nanala azy hihinana, ary namerina azy indray isaky ny manaikitra. Ilay bitsika tezitra haingana miaraka amina valiny milaza ho dondrona ny fanambaran'ny Governora.
Nanazava ny governemanta fa rehefa misakafo any amin'ny trano fisakafoanana ny olona dia tokony hisaron-tava fa tsy rehefa mihinana sy misotro - manazava bebe kokoa: tsy eo anelanelan'ny manaikitra tsirairay.
Ao amin'ny Walks Automation
Any Isiraely, novolavola tarehy iray izay misy fanaraha-maso lavitra. Mamela ny hisakafoanana ny mpihinana nefa tsy manala ny saron-tava. Ny sarontava dia azo sokafana amin'ny tanana lavitra amin'ny mekanika na ny saron-tava dia hihetsika avy hatrany rehefa mahatsapa fitaovana iray manakaiky ny fisokafan'ny saron-tava. Ny filàna dia renin'ny famoronana.